Reachli: Iyo Inotaridza Kushambadzira Network | Martech Zone
Reachli: Iyo Inotaridza Kushambadzira Network
Muvhuro, Kukadzi 25, 2013 Muvhuro, Kukadzi 25, 2013 Douglas Karr
Isu takagovana zvimwe zvemukati zvinokurudzira masisitimu senge Outbrain. Ko kana zvirimo zvisiri zvemavara mune zvakasikwa, zvakadaro, uye zvinoonekwa zvakanyanya - semakoponi, grafiki yeruzivo, mifananidzo yekutengesa, mafoni-kune-chiito kana mifananidzo? Reachli inoratidzira yekushambadzira network.
Reachli ane vanopfuura 70,000 vashambadzi vanowana anopfuura mamirioni 3.5 kutariswa pamwedzi! Reachli ane tekinoroji yekudyidzana-uye-yemhando inoshandisa kiyi, mamiriro, uye mapikicha anoenderana algorithms kubatanidza chero iripo mufananidzo pawebhu ine inonyanya kukodzera uye ichiita-mumufananidzo kushambadzira. Uye kana iwe uri muparidzi ane anotevera makuru pane yako saiti uye enhau enhau maakaundi, Reachli anogona kukubatsira iwe kuita mari nharaunda iyoyo.
Kutenda kuchikwata kuHCCMIS, a travel insurance kambani, yekunongedzera saiti kwandiri nhasi. Timu yekushambadzira uko inoita basa risinganzwisisike kusimudzira zvinoonekwa uye kuwana mhinduro hombe! Ivo vakagwinya B2C vashambadzi vanoedza uye kuyera zvese zvavanoita.
Tags: mushambadzi networkkushambadzira networkmutsikisireachlikushambadza kunoonekwazvemukati zvemukati